ASAN-DAHALO MIAMPY VONO OLONA TAO BEKILY : Miisa telo namoy ny ainy, tafaverina ny omby halatra
Lasibatry ny asan-dahalo hatrany ny any amin’ny Faritra Atsimon’ny Nosy, na eo aza anefa izany dia manohy ezaka sy ady amin’izany ny eo anivon’ny mpitandro filaminana mba hiarovana ny vahoaka sy ny fananany. 22 août 2019
Araka ny tatitra voaray avy amin’ny zandarimariam-pirenena omaly, teo am-panoratana ny lahatsoratra izao dia nisehoana trangana halatr’omby miampy vono olona ny tao amin’ny fokontany Belamoty, kaominina Tanandava, Distrikan’i Bekily, Faritra Androy, ny alin’ny 20 aogositra 2019, tokony ho tamin’ny 10 alina. Vokatr’izay dia omby miisa 46 no lasan’ny malaso ary maty tamin’io fotoana io ilay tompon’omby antsoina hoe Vazahamena izay Sefo fokontany tao an-toerana. Mafy dia mafy ny fifandonana tamin’ny olon-dratsy hany ka nitarika hatramin’ny fahafatesan’io rangahy io.
Rehefa naharay antso ny Zandary ao amin’ny Borigadin’i Beraketa, avy hatrany dia nanatontosa fanarahan-dia niaraka tamin’ireo miaramila mpampandry tany marobe. Teo amin’ny kizo atao hoe Antsary , izay ao anatin’ity Distrika ity ihany no nifandona ny Zandary sy ny malaso ka lavo ny roa tamin’ ireto farany. Lasa vaky nandositra kosa ireo namany ka taorian’ny sava hao natao dia voaverina avokoa ny omby very izay efa any amin’ny tompony taorian’ilay fifandonana mahery vaika.
Nahafapo ny vahoaka araka izany ny fomba fiasa satria nahay nifanome tanana tanteraka ny fokonolona mpanara-dia, ny zandary ary koa ny kalony isany mpiaro ny mponina ao an-tanàna. Nisaotra ny fahavitrihan’ny zandarimaria moa ireo mponina ary mbola vonona hatrany hifanome tanana.